Midowga yurub oo somaliya ugu deeqaya milaayiin dollar oo gargaar ah | Raascawad
Midowga yurub oo somaliya ugu deeqaya milaayiin dollar oo gargaar ah
Brussels(Raascawad Media)-Ururka midowga yurub ayaa sheegay in somaliya ay ku taageerayaan 105 milyan oo dollar oo gargaar ah sida ay sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan ururkaasi
Deeqdaasi gargaarka ah ee loogu talay galaya Somaliya ayaa imaanaysa,iyadoo todobaadka soo socda kulan looga hadlayo arimaha somaliya uu ka furmayo magaalada Brussels ee xarunta ururkaasi.
“musiibooyin bani,aadimo oo isagu jira abaaro xoogan iyo fatahaado ayaa labadii sanno ee la dhaafay ku dhuftay somaliya kuwaasoo saameeyay nolosha milaayiin ruux”sidaasi waxaa yiri Christos Stylianides oo ka tirsan saraakiisha dhinaca gargaarka ee midowga yurub.
Mr Christos ayaa sidoo kale sheegay in lacagtaasi lagu samata bixin doono dadka nugul iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka ee sida ba,an u saameysay dhibaatooyinka bani,aadinimo.
Midowga yurub ayaa xusay in qayb ka mid ah lacagtaasi oo la uruuriyey sannadkii hore lagu gargaar doono dadka ay barakiciyeen abaaraha,waxaana wax looga qaban doono caafimaadka,nafaqeynta caruurta yar yar,biyo nadiif ah oo ay dadka helaan iyo waliba badbaadinta xoolaha.
Gudiga midowga yurub ayaa hoosta ka xariiqay in kala bar dadka somalida ah ay u baahan yihiin gargaar bani,aadinimo,iyadoo dhinaca kale ka digtay in 1.2 milyan oo caruur ah ay wajahayaan nafaqo daro.
Saraakiisha dhinaca gargaarka u qaabilsan ururka ayaa sheegay in ku dhawaad hal milyan oo ruux ay sameysay faatahadii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobalada koofureed ay somaliya,halkaasoo ay ka dhasheen dhibaatooyin bani,aadinimo